လက်ကား KD-C25SRT စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု 8.93 သန်း pixels 3840*2160 resolution 4K PTZ ကင်မရာ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
KD-C25SRT စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် 8.93 သန်း pixels 3840*2160 resolution 4K PTZ ကင်မရာ
2. 4K အဆ 20 optical zoom၊ SRZ 4K 30 ကြိမ်၊ HD 40 ကြိမ်၊
3. Servo motor မြန်နှုန်းမြင့် ပန်ကာ/စောင်း၊ ပန်/စောင်း အမြန်နှုန်း 0.1°~300°/sec;
4. SRT ကြိုးမဲ့၊
6. SRT၊ HDMI 4K ဗီဒီယိုအထွက်;
7. အချိန်ကုဒ်၊ 1920×1080@60fps Ultra TF (MicroSD) FAT32၊ exFAT ဖြင့် MP4/MOV မှတ်တမ်းတင်ပါ။
8. တိုက်ရိုက် SRT၊ RTMP၊ 360° တာလီမီးများ၊dual φ9.7 မိုက်ခရိုဖုန်း ခင်းကျင်းမှု omnidirectional မိုက်ခရိုဖုန်းများ;
10. အရွယ်အစား- 160mm×155mm×230mm;အလေးချိန်: 1.6 ကီလိုဂရမ်ခန့်;
Alibaba တွင် KD-C25SRT ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
ပုံဆွဲသူ 1/2.5" Back-Illuminated Exmor r Cmos အာရုံခံကိရိယာ
ထိရောက်သော Pixels များ 8, ၉၃၀, ၀၀၀ ပစ်ဇယ်
အချက်ပြစနစ် 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, ၇၂၀/၅၉, 94p, 2160/25p, 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 2160/23.98p, 1080/23.98p
Optical Zoom 4K 20x, SRZ 4k 30x, HD 40x
ထောင့် ပန်-175°～+175°, စောင်း+90°～-30°
အရှိန် Servo မော်တာထိန်းချုပ်မှု, မြန်နှုန်း- အဆင့် 0.1°～300°/s, စောင်း 0.1°～300°/s
တိကျမှု တိကျမှု ထပ်တလဲလဲနိုင်မှု အမှား <0.01
အနိမ့်ဆုံး အလင်းရောင် 0.75 Lux
White Balance ၊ အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ်
Focal Length f=4.4mm～88mm, f2.0(အကျယ်)～f3.8(တယ်လီဖုန်း)
အနိမ့်ဆုံးအရာဝတ္ထုအကွာအဝေး 10mm～Inf (Wide), 1500mm～Inf (Tele) (မူရင်း: 300mm)
ကြိုတင်သတ်မှတ်အနေအထား ပုံသေ ၁၂၈
ထိန်းချုပ်မှု အင်တာဖေ့စ် Visca RS-485/RS-232,RJ45 (အဝင်/အထွက်), ထိန်းချုပ်မှု၊ SRT ကြိုးမဲ့ ပံ့ပိုးမှု
အင်တာဖေ့စ် BNC,1.0 Vp-p, 75ω, 3G-SDI Out×2(Option);SRT RJ45×1,SRT ကြိုးမဲ့ Wi-Fi ×1 Ieee802.11a/b/g/n/Ac၊USB × 1၊HDMI(4K)Out×1, မိုက် In×1
ကြိုးမဲ့ဂီယာ SRT ကြိုးမဲ့, 150ms နှောင့်နှေးသည်။
ဗီဒီယို ကုဒ် H.264 Baseline/Main/High Profile, ၄:၂:၀, အများဆုံး: 8mbps
မှတ်တမ်းကတ် Ultra Tf(Microsd)Fat32၊Exfat
တိုက်ရိုက်လွှင့် SRT, Rtmp
မိုက်ခရိုဖုန်း φ9.7×2 မိုက် (Array Omnidirectional Microphone, 32k နမူနာ, i2s 48khz, Aec, Agc, Ans)
ဒါရိုက်တာ အကြံပေးချက်များ 360° တာလီ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ DC Jack 12dc, DC10.8v-13.2v
ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ 1/2.5 အမျိုးအစား နောက်ခံအလင်း Exmor R CMOS ရုပ်ပုံကိရိယာ၊
Optical zoom 4K အကြိမ် 20၊ SRZ 4K 30 ကြိမ်၊ HD 40 ကြိမ်၊
ဆုံမှတ်အရှည် 4.4 မီလီမီတာ (f = အနံ) ~ 88 မီလီမီတာ (tele), F 2.0 ~ F 3.8;
ရုပ်ပုံဖန်တီးသူ (ထိရောက်သော ပစ်ဇယ်များ) 8.93 သန်း ပစ်ဇယ်;
အချက်ပြစနစ် 4KUHD 2160/29.97p, 2160/25p, 2160/23.98p;
အချက်ပြစနစ် FHD HD 1080/59.94p, 1080/59.94i, 720/59, 94p, 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 1080/23.98p;
အနိမ့်ဆုံးအလင်းရောင် (50IRE) အရောင်- 0.75 lx (F1.8၊ AGC on, 1/30 s);
အလျားလိုက် ရုပ်ထွက် 1800 တီဗွီလိုင်းများ (3G-SDI အထွက်) (ဗဟို);
အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ်ကို ရယူပါ (-3dB မှ +33dB);
ရှပ်တာအမြန်နှုန်း- 1/1 စက္ကန့်မှ 1/10000 စက္ကန့်၊ 22 လှမ်း၊
အလင်းဝင်ပေါက် ထိန်းချုပ်မှု- အလိုအလျောက်၊ လူကိုယ်တိုင်၊ ဦးစားပေးမုဒ် (ရှပ်တာဦးစားပေး၊ အလင်းဝင်ပေါက်ဦးစားပေးနှင့် ဦးစားပေးမှုရရှိရန်);
အလင်းဝင်ပေါက်ထိန်းချုပ်မှု 16 ခြေလှမ်း;
အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ အလိုအလျောက်၊ အလိုအလျောက် ခြေရာခံ အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ၊ အိမ်တွင်း၊ ပြင်ပ၊ ပြင်ပအလိုအလျောက်၊ ဆိုဒီယမ်မီးခွက်၊
အာရုံစူးစိုက်မှုစနစ်- အလိုအလျောက် (အာရုံခံနိုင်စွမ်း- ပုံမှန်၊ အနိမ့်)၊ သော့တစ်ချောင်းအလိုအလျောက် အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လက်စွဲ၊ ကြားကာလ အလိုအလျောက် အာရုံစူးစိုက်မှု။
အတိုဆုံးအရာဝတ္ထုအကွာအဝေးမှာ 10mm (ထောင့်ကျယ်ဆုံး) မှ 1500mm (distal) (မူလ- 300mm);
ပန်/စောင်း ထောင့်ပန်- ±175° အထွတ်- +90°/-30°;
ပန်/စောင်းအမြန်နှုန်း- ဆာဗိုမော်တာထိန်းချုပ်မှု၊ ပန်ကန် 0.1°~300°/sec၊ စောင်း 0.1°~300°/sec;
ပန်/စောင်း တိကျမှု ထပ်တလဲလဲနိုင်မှု တိကျမှု အမှား <0.01°;
ပန်/စောင်း အနှေးမုဒ် ပံ့ပိုးမှု။
PTZ ခြေရာခံမှတ်ဉာဏ် 16;
4K ဗီဒီယိုအထွက် HDMI;
HD ဗီဒီယိုအထွက် 3G-SDI၊ HDMI၊ SRT;
HDMI အရောင် gamut YCbCr၊ 4:2:2 RGB၊ 4:4:4;
အသံကြားခံ MIC IN×1;
ကင်မရာထိန်းချုပ်မှု အင်တာဖေ့စ် VISCA RS-485/RS-232၊ SRT-RJ45 ကြိုးတပ်နှစ်လမ်းထိန်းချုပ်မှု၊ SRT ကြိုးမဲ့နှစ်လမ်းထိန်းချုပ်မှု။
အထွက်အင်တာဖေ့စ် BNC(×1)၊ 1.0 Vp-p၊ 75Ω၊ 3G-SDI အထွက်×၁၊HDMI(4K) အထွက်×1၊SRT ကြိုးမဲ့- RJ45×1၊ SRT ကြိုးမဲ့-ကြိုးမဲ့ WiFi အင်တင်နာ×1 IEEE802.11a/b /g/n/ac, USB ×1;
ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှု- SRT ကြိုးမဲ့၊ 150ms နှောင့်နှေးမှုဖြင့် WiFi ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဗီဒီယို ကုဒ်နံပါတ်- H.264 အခြေခံ/ ပင်မ/ မြင့်မားသော ပရိုဖိုင်၊4:2:0၊ အများဆုံးပံ့ပိုးမှု 8Mbps;
အသံကုဒ်နံပါတ်- AAC LC၊ ပံ့ပိုးမှု 32 Kbps၊ 64 Kbps၊ 96 Kbps၊ 128 Kbps၊
အသံဖမ်းဖော်မတ်- MP4 / MOV;အသံဖမ်းဖော်မတ်- အများဆုံးပံ့ပိုးမှု 1920x1080@60fps;အချက်ပြဖော်မတ်- တိုးတက်သောနှင့် ယှက်နွယ်နေသော အချက်ပြမှုများကို ပံ့ပိုးပါ။SD ကတ် ဖိုင်စနစ်ဖော်မတ်သည် FAT32၊ exFAT ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။NDI အဝေးထိန်း နှစ်လမ်းထိန်းချုပ်၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တိုးတက်မှု အချက်အလက် တုံ့ပြန်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
အသံဖမ်းကတ်- Ultra 128GB TF (MicroSD) မမ်မိုရီကတ် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု- SRT၊ RTMP ပံ့ပိုးမှု၊
Built-in array microphone- dual φ9.7 microphone array microphone၊ omnidirectional၊ low noise, 360-degree omnidirectional pickup ကို ပံ့ပိုးသည်၊ အမြင့်ဆုံး ပစ်ကပ်အကွာအဝေးမှာ 10 မီတာ၊32K နမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့် AEC၊ AGC၊ ANS စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ I2S ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအထွက် 48KHz ကို ပံ့ပိုးပါ။ကြည်လင်ပြတ်သားသော အသံ၊ ကောင်းမွန်သော အသံအရည်အသွေး ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု၊ သက်သောင့်သက်သာ အကြားအာရုံ၊ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု၊ မြင့်မားသော လျှော့ချရေးဒီဂရီ၊ မြင့်မားသော အချက်ပြမှုမှ ဆူညံသံအချိုး၊
DC ထည့်သွင်းမှု- DC ပေါက် 12DC၊ DC10.8V-13.2V;
ဒါရိုက်တာ အချက်ပြချက်- 360° Tally light;
KD-C25SRT ကင်မရာများစွာသည် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး အကွာအဝေးကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်အချက်ပြမှုရှိနေသရွေ့၊ အသံနှင့် ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို တည်ငြိမ်စွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး ရုပ်ပုံသည် ≤150ms နှောင့်နှေးမှုနှင့်အတူ ကြည်လင်ချောမွေ့ကာ၊ အမြီးဆွဲခြင်းမရှိဘဲ၊ KD-C25SRT ကင်မရာထိန်းချုပ်မှုနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ပထမဦးစွာ၊ ကင်မရာ၏တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လှည့်ခြင်း၊ စောင်းခြင်းနှင့် စောင်းခြင်းကို ကြိုးမဲ့ဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ထိန်းချုပ်မှုကို Kaidi ၏ ဗီဒီယို၊ ထုတ်လွှင့်မှု၊ အသံသွင်းခြင်းနှင့် virtual all-in-one စက်ကိရိယာအစုံအလင်ဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။၎င်းသည် ကြိုးမဲ့စာရင်းသွင်းမှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ အချက်အလက်အားလုံးကို ရရှိရန်အတွက် Kaidi စက်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်လည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။တုံ့ပြန်ချက် အချက်အလက်တွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တိုးတက်မှု၊ အချိန်၊ စွမ်းရည်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖိုင်အမည် စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
ယခင်- KD-LC-16UHN အရည်အသွေးမြင့် ကိရိယာ အိတ်ဆောင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ကာစ်တ်
နောက်တစ်ခု: KD-3DVC-6M မျက်နှာပြင်အပြည့် အိတ်ဆောင် 3D 4K Reality Virtual စက်
KD-C25UH-B တရုတ်ရောင်းချရေးလက်ကား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု...
KD-C1000NW အရောင်းရဆုံး နောက်ဆုံးထွက် ဒီဇိုင်း Stream Wir...
KD-C1000SRT အရည်အသွေးမြင့် Ptz အသံလွှင့် ဗီဒီယို C...
KD-C25UH တရုတ်ရောင်းချသူ လက်ကား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု C...
KD-C18SRT စက်ရုံစျေးနှုန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု D...
KD-C25NW အပြည့်ထည့်ထားသော 1/2.5-Inch Exmor R Cmos ...